Tababare Allegri oo ka hadlay mustaqbalka Ronaldo, kaddib markii ay Juventus ka hartay Champions League – Gool FM
Dajiye April 19, 2019
(Yurub) 19 Abriil 2019. Tababaraha kooxda Juventus ee Massimiliano Allegri ayaa xaqiijiyay in Cristiano Ronaldo uu yahay mustaqbalka Bianconeri, isagoo dhaca kale rajeeday in kulanka habeen dambe ay la ciyaari doonaan Fiorentina uu ku dhamaado in Juventus ay u dabaal degto ku guuleysiga koobka horyaalka Talyaaniga.
Kooxda Juventus ayaa habeen dambe soo dhaweyn doonta Fiorentina, si ay u wada ciyaaraan kulan ka tirsan kulamada 33-aad ee horyaalka Talyaaniga, Bianconeri ayaa u baahan kaliya 2 dhibcood, si ay si rasmi ah ugu guuleysato koobka horyaalka Serie A.
Saxaafada Talyaaniga ayaa shaaca ka hadashay shalay mustaqbalka Cristiano Ronaldo ee kooxda Juventus, waxayna tilmaameen inuu ka tagayo xagaaga 2020.
Hadaba Massimiliano Allegri oo kasoo muuqday shir jaraa’id kahor kulanka Fiorentina ayaa ka hadlay mustaqbalka Cristiano ee kooxda Juventus wuxuuna yiri.
“Cristiano waa mustaqbalka Juventus, wuxuu sameeyay qaab ciyaareed heer sare ah sanadkan, wuxuuna markale sameyn doonaa xili ciyaareedka soo socda”.
“Dabcan wuxuu dareemayaa niyadjab weyn, sida dadka oo dhan, lakiin wuu xasiloon yahay”.
“Joogitaanka Ronaldo ee kooxda Juventus, ma balan qaadeyso inaan ku guuleysan doono Champions League, tani waa kubadda cagta, hadda waa inaan sii wadnaa oo aan ka fekernaa inaan ku guuleysano horyaalka”.
“Cristiano wuxuu ka qeybgali doonaa kulanka Fiorentina, Juan Cuadrado sidoo kale, waana inaan helnaa maalin weyn oo aan u dabaaldegno ku guuleysiga horyaalka”.
“Haddii aan ku guuleysaneyno horyaalka kulanka soo aadan ee Fiorentina, waxaan bilaabi doonaa qorsheyn xilli ciyaareedka soo socda, waxaan qiimeyn doonaa wax walba oo dhacay xilli ciyaareedkan, hadii ay fiicnaayeen iyo hadii kale, sanadkan wuxuu ahaa mid u fiican Juventus, kadib markii ay ku guuleysatay Italian Super Cup iyo horyaalka”.
Maxay tahay sababta ay kooxda Juventus kaga hartay heshiiska Samuel Umtiti???
RASMI: Lionel Messi oo loo magacaabay xiddiga isbuuca ee Champions League... (Yaa ku guuleystay Goolka todobaadka ee UCL?)